Thursday July 18, 2019 - 07:38:34 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Bulshada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad gobaleedka Galmudug ayaa duleedka magaalada qado sharaf mahad celin ah ugu sameeyay Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) mudane Xasan Cali Khayre oo deegaannada Galmudug u jo
Bulshada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad gobaleedka Galmudug ayaa duleedka magaalada qado sharaf mahad celin ah ugu sameeyay Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) mudane Xasan Cali Khayre oo deegaannada Galmudug u jooga dhismaha Galmudug loo dhanyahay.
Qada Sharafta oo ay soo agaasimeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo xildhibaanadda deegaanka laga soo doorto ayaa dhammaan dadkii ka hadlay waxa ay Ra’iisul Wasaaraha uga mahadceliyeen dadaalka dheeraadka ah ee uu ku bixinayo dhismaha Galmudug loo dhanyahay oo u adeegta dhammaan reer Galmudug, waxa ayna ballan qaadeen in ay dowkooda qaadanayaan.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ka mahad celiyay qado sharafta, Soo dhaweynta iyo wada-shaqeynta ballaaran ee dhammaan reer Galmudug u muujiyeen ayaa bulshada Dhuusamareeb ka codsaday in ay soo dhaweeyaan dadka reer Galmudug ee kasoo qayb gelaya gogosha dib-u-heshiineed ee magaalada taalla, ayna muujiyaan in caasimaddu tahay magaala madax loo simanyahay, tanaasulaan, cid kasta oo tabasho qabtana ay fadhigeeda ugu tagaan oo ay qanciyaan.
Ra’iisul Wasaaraha oo bulshada Dhuusamareeb u caddeeyay in dowladda ay ka go’antahay in reer Galmdug ay kala shaqeyso dhismaha Dowlad gobaleed Galmudug dhammays ah, ayaa sheegay in meel wanaagsan lasoo gaaray hase yeeshee loo baahanyahay in dhamystirka loo dhabar adeygo oo reer Dhuusamareeb ay qaataan dowr hoggaamineed si la isugu keeno dhammaan reer Galmudug looguna gogol xaaro doorasho xor iyo xalaal ah.
Horumarka Galmudug ayuu sheegay Ra’iisul Wasaaruhu inuu qabyo ahaanayo inta argagaxisadu ay qayb kamid ah ku suganyihiin, waxa uuna ku baaqay in dib-u-dhiska kaliya aan lagu ekaan ee deegaannada dhan la xoreeyo si dhammaan reer Galmudug oo xor ah ay isaga kaashanaan ka shaqeynta horumarka iyo la tartamidda dowlad gobaleedyada kale.
Mudane Xasan Cali Khayre ayaa mar kale ugu baaqay dhammaan dadka reer Galmudug ee wali hubku uu gacantooda ku jiro in hubka ay ku wareejiyaan dowladda oo ciidamada la diiwaan geliyo si loo helo ciidan xooggan oo ka qayb qaata xoreynta dalka iyo ilaalinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.